Nkwụ Springs ọ dị mma maka ịgba igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Okporo ụzọ na-agba ịnyịnya ígwè nkwụ - ịchọta ihe ngwọta
Okporo ụzọ na-agba ịnyịnya ígwè nkwụ - ịchọta ihe ngwọta
Nkwụ Springs ọ dị mma maka ịgba igwe kwụ otu ebe?
Site na ụbọchị 300 nke anwụ na-acha kwa afọ, ebe obibi mara mma, ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke narị afọ gara aga na nrụnye nka mara mma n'èzí, UkwuuNkwụ Springsbụ zuru okè ebe inyocha siteigwe kwụ otu ebe.16.02.2018
kedu ihe ụmụ okorobịa a bụ Josh si California site na oghere m Bịa taa m ga-egosi gị ihe 17 ị ga-eme na Palm Springs Number otu nkwanye bụ Palm Springs Aerial Tramway The Palm Springs Aerial Tramway has the most rotating tram in the world and takes were gị na njem nke ihe karịrị 2.5 kilomita na 8,000 ụkwụ na elu. Mgbe ị ruru n'elu ọdụ, ị ga-emeso ka breathtaking echiche nke ndagwurugwu n'okpuru.
Rie nri ebe a na ụlọ oriri na ọ restaurantụVụ Gaa na obere ụlọ akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ gaa njem, ụzọ m kachasị amasị m na-akpọga gị SanJacinto Summit njem njem 10 maka otu n'ime echiche kachasị mma na Southern California. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dịtụ jụụ, enwere mkpumkpu loop ụzọ ụkwụ ebe a bụ ndị na-nnukwu Adabara ezinụlọ dum. Nkwado nọmba abụọ bụ PalmSprings Air Museum The Palm Springs Airmuseum bụ ebe dị mma ịbịaru ụfọdụ na nso? thelọ ihe ngosi nka nwere nnukwu hangars anọ nke ọ bụla site na agha ọzọ ma ọ bụ akụkụ nke agha a na ụgbọ elu ahụ nọ n'ọnọdụ dị mma, enwere ọtụtụ ozi gbasara agha na banyere ụgbọ elu ahụ na achọtara m ndị nkuzi na ụlọ ngosi ihe nka ọ bụla ebe m nọrọ anọwo, n'etiti ndị kachasị enye aka, ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ na ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ agbapụlarị ụgbọ elu ndị nọ na ebe ngosi ihe mgbe ochie na otu n'ime hangars ị nwere ike banye na igbe mkpuchi nke B-17 na mgbe ọ bụrụ na ị enwere ebe na ngwụcha izu, ị ga-ahụkwa otu ụgbọ elu na-apụ apụ, abụrụla m ebe a na ebe ngosi nka oge ole na ole, ọ na-amasị m ileta ya ugboro ugboro na ọtụtụ ndị mmadụ ga-enweta ya nkwanye nọmba nke atọ bụ Morton Botanical Garden m hụrụ ya n'anya n'ezie ịnọ n'ogige a Palm Springs inyocha, ma gwa ndị ọzọ ugboro ole a na-egosipụta ya na mgbasa ozi mmekọrịta kama ọmarịcha okooko osisi ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ a na-ejupụta na cacti dị jụụ, ahịhịa aloe na succulents, ịkpọ aha ole na ole.
You nwere ike ịga nzọ ụkwụ echere ma ọ bụ na-awagharị gburugburu ma gbagoo elu ma nwee ụzọ ụkwụ dị iche iche, jide n'aka na ị ga-aga ebe Kacct na mgbe ị nọ ebe ahụ enwere nchịkọta cacti niile dị na griin haus. Na mgbakwunye enwere mbe dị n'ọzara na m na-enwekarị mmasị ịlele Ntuziaka nọmba anọ bụ inyocha obodo PalmSprings na Walk of Fame Palm Spring bụ nnukwu obodo iji na-agagharị n'okporo ámá ndị na-ewu ewu nke nwere ụlọ nri maka ịzụ ahịa na ịga ije gụnyere nke ha PalmSprings Walk of Fame. Amaghị m ọtụtụ ndị nwere kpakpando na Walk of Fame, mana enwere ole na ole m na-ahụ dị ka Marilyn Monroe Adam West Frank Sinatra na Elvises nwekwara ọla nchara ọla edo nke LucilleBall site na m hụrụ Lucy na Sonny Bonoplus enwere nza nke nnukwu ụlọ ahịa ebe niile dị na obere ụlọ ebe a na-ere ihe ochie nke ụlọ ahịa ochie na ọtụtụ narị ihe dị iche iche nwoke chịkọtara n'ime ụbọchị ole na ole gara aga. Ruo ọtụtụ narị afọ, ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ adịla ochie dị ka ngwụsị narị afọ nke 19 na 95% n'ime ha nwere nkwakọ ngwaahịa mbụ nke na-emepebeghị.
Laidlọ ihe ngosi nka anọrọ dị ka ụlọ ahịa izugbe na nkwanye ihe ngosi nka nke isii bụ Palm Springs Art Museum ma ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe? nke oge a na nkà na ihe ọkpụkpụ mgbe ahụ Palm Springs ArtMuseum bụ maka gị. Nke a bụ ụdị nka masịrị m nke ukwuu. Abịala m na ebe ngosi nka pụrụ iche dị na etiti obodo ugboro ole na ole ihe ngosi a na-agbanwe ma enwere ogige abụọ na-adịgide adịgide n'elu ala nke na-atọ m ụtọ ileta Thelọ ihe ngosi nka n'onwe ya nwere 3 ala nwere ngosi nke ụdị dị iche iche nke nka iko foto, ije na Native American nka m mgbe niile na-eme atụmatụ na ọ dịkarịa ala otu awa ebe a Presley nọrọ ya honiimuunu n'abalị mgbe ha na-anọghị oge dị ukwuu ebe a ma e wezụga n'abalị a ọ bụ m nwere a fun njikọ na a mara mma ụlọ ịhụ na-agagharị ugboro abụọ kwa ụbọchị, ha na-akpọrọ gị gaa n'ụlọ ahụ dum na ndị nduzi na-akọwa ihe owuwu ụlọ na njikọ Elvisit.
Ọ bụ nnukwu ihe ọ funụ na njem m nwere obi ụtọ mgbe m na Palm Springs Ntuziaka nọmba asatọ bụ nsụda mmiri na Tahquitz Canyon Tahquitz Canyon bụ obere mkpirisi dị mkpirikpi n'etiti Palm Springs nke dị na Agua Calienteland. Ya mere, ọ na-efu iji bulie ebe a ka ị mara na ị na-achọ nnukwu njem njem dị nso na obodo, nke a bụ otu n'ime ihe kachasị mma njem ahụ na-eweghachi gị na ndagwurugwu ma mechie na nsụda mmiri oge oge karịa oge m gara aga Enweghị mmiri , ma na njem mbụ m enwere ezigbo nsụda mmiri dị n'etiti ọzara, ọbụlagodi mgbe enweghị mmiri na-enye ụfọdụ ọmarịcha echiche nke ndagwurugwu na Palm Springs na ntinye nkwado dị nọmba 9 bụ naanị ịnọ n'akụkụ ọdọ mmiri otu n'ime elslọ oriri na nkwari akụ ịnọ ọdụ na Palm Springs bụ nke ziri ezi mgbe itinye oge n'akụkụ ọdọ mmiri adịghị mma. Imirikiti ndị mmadụ na-abịa obodo a iji lelee ụlọ oriri na ọ barụ restaurantụ na ebe a na-ere mmanya ma zuru ike n'akụkụ ọdọ mmiri dị na mbara ọzara, nke abụghị ụzọ m kachasị agagharị, mana ụlọ nkwari akụ dị ka ACE na Saguaro na-eme Saguaro ezigbo ọ funụ karịsịa ebe kachasị mma foto dị ka o nwere ndị na-enwu gbaa na agba na nkwụ iyi style mere mere ama.
Nkwado nọmba 10 bụ PalmSprings windmills Palm Springs bụ nnoo ama maka ikuku ya nke na-eme ka ihu ala dị ka ị na-abanye n'ime ya maka ozi ndị ọzọ, mana ọtụtụ oge anaghị m ewere ya n'onwe m, naanị m na-ebugharị n'okporo ámá abụọ dịka IndianCanyon wee chọta ebe ịse foto na ịse foto ndị ahụ dị jụụ na-ahụ n'ezie oke oke ihe ndị a bụ Nkọwa nọmba 11 bụ ịga leta Joshua Tree National Park mgbe ịmechara ya? Nọrọ ụbọchị ole na ole na Palm Springs mgbe ahụ ịkwesịrị ịpụ ma chọpụta Joshua Tree National Park. Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị amasị m na ndịda California na enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme ebe a, site na ịgagharị na ịrị ugwu na ịgagharị akụkọ ihe mere eme nke mpaghara Robo Lights bụ ihe pụrụ iche pụrụ iche na Christmas na Palm Springs na nke ndị mmadụ hụrụ n'anya ma ọ bụ kpọọ asị. Achọtara m onwe m n'ụdị ịhụnanya, ọ bụ ihe ọ greatụ dị ukwuu ịhụ nde ọkụ ọkụ ebe niile, a na-edozi ihe okike ndị a. Ọ bụ ebe a na-ewu ewu n'oge oge ekeresimesi ma enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na akụrụngwa ahụ, yabụ ị ga-eme atụmatụ ịhapụ ma ọ dịkarịa ala minit 30 ruo elekere ebe a ma ọ bụrụ na ịnọghị n'oge oge ekeresimesi, ị ka nwere ike ịkwọ ụgbọala gafere ụlọ ma hụ ụfọdụ. nke ígwè ọrụ na-ahụ si na nkuku ihe ngwa ngwa njem bara uru ziri ezi maka ndụmọdụ ise ikpeazụ m chọrọ ka m wụ ụfọdụ n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantsụ favoriteụ m kachasị amasị m nri ọnụ ọgụgụ bụ chi chi maka anụ ezi anụ ezi chi chi bụ otu n'ime ebe nri ụtụtụ kachasị amasị m. mgbe m gara nkwụ na ọ bụ ewu ewu n'ezie wee bia ebe ahụ mgbe ha na-aga na ngwụsị izu na-emeghe ma ọ bụ na-akwadebe ichere, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nwere ebe obibi mara mma n'èzí mgbe ọ na-adịghị otu narị ogo n'èzí na menu nwere ọtụtụ nhọrọ ọchị gbanwee kwa izu.
Otu ihe dị na menu bụ ụgbọ elu nke anụ ezi, nke bụ mpekere anụ ezi ise, nke ọ bụla esi nri dị iche iche, mana ị gaghị enwe mmechuihu? maka ihe ndị ọzọ menu, ma nkwanye nri m nke abụọ bụ Ellmers RestaurantEllmers bụ isi mmiri Palm Palm maka ihe karịrị afọ 30. Nke a na-eri nri na-eje ozi otu n'ime nri ụtụtụ kachasị mma na obodo ahụ na German pancakes a ma ama bụ ìgwè mmadụ na-atọ ụtọ lemon wedges ka afanye, na pancake nwere ihu ọma na-ekpuchi efere niile ma ọ siri ike ịkụ aka, ọ bụ otu n'ime ebe nri kachasị amasị m n'obodo nke atọ. Nke a bụ ndoputa Starbucks, ebe a na-echekwa Starbucks bụ ụlọ ahịa ha mara mma nke m gara na Seattle na mpụga ọnọdụ PalmSprings. Starbucks a nwere ụdị mmanya na-enweghị atụ ị gaghị ahụ ebe ọzọ na-eji ụzọ kọfị dị iche iche na ọbụna mmiri ara ehi m na-erikarị. the Melrose, nke dị ka mmanya Manhattan mana ejiri kọfị kọfị kama ị alcoholụ mmanya.
ụlọ ahịa okirikiri
Ọ bụ ụlọ ahịa mara mma na nnukwu ebe ịnọ ọdụ maka nkeji ole na ole na obodo Palm Springs, PalmSprings Ha nwere ọtụtụ nhọrọ Pizza na-atọ ọchị ịzụta site na iberi. Ihe kacha amasị m bụ Elton John ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụ nhọrọ n'efu John Henry ya na ose ya na jalapenos ya na ọrụ ya, mana n'eziokwu, ị nweghị ike ịmehie ihe ọ bụla pizzas ha nwere? ịzụrụ ịzụta diski ahụ ma mee ka m mara ihe kachasị amasị gị na nkwupụta m na-atụ aro ikpeazụ m na ọ ga-abụ ma nwee mmiri ara ehi na-ama jijiji ma ọ bụ na-agwụ ike whipfloat na lapid mbụ apụ m n'aka na abụghị m naanị otu onye hụrụ ezigbo mmiri ara ehi na Greatshakes abụwo ụlọ ọrụ Palm Springs a ma ama kemgbe ọtụtụ afọ, ha na-eme ụfọdụ n'ime mmiri ara ehi kachasị mma nke nwere ihe karịrị ụtọ 25 dị iche iche na amini donut na ahịhịa ọ bụla juputara oge niile mana ọ ga-echere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ịchọrọ gaa nkikara akwa wee nweta Palm Springs ọzọ na-ewu ewu na-emeso dole whipfloat dị ka ama Disneyland eji megharịa ọnụ ọtụtụ ndị gụnyere m chọta nke a? ị ga-ahụrịrị n'obodo ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado painiapulu mgbe ahụ ị ga-enwe mmasị na eji megharịa ọnụ a mana n'eziokwu ị nweghị ike ịgahie na akwa ma ọ bụ akwa iji chọpụta, biko mee ka m mara ma m gbakwunye ọkacha mmasị gị Ebe ndị ọzọ na steeti Aga m ahụ gị n’izu ọzọ
Ebee ka m nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè m na La Quinta?
Nke iseUgwuIgwe kwụ otu ebeIlszọ ụkwụ
Nzọ Dunn: Hahn / Buena Vista ♡ Katidral City, California. Ekwentị | 17.0 mi.
Boo Hoff ilzọ ♡Nke ise, California. Nke di elu | 6.0 mi.
Trazọ Ewu Ewu ♡ Palm Springs, California.
Nkwụ Canyon Epic ♡ Palm Springs, California.
Cove na-aga n'Ọdọ Mmiri ♡Nke ise, California.
Kedu oge kachasị mma iji gbaa igwe kwụ otu ebe na Palm Springs?
Chọta ụzọ igwe kwụ otu ebe maka gị site na Palm Springs, ebe anyị nwere ụzọ ụzọ 142 iji chọpụta. Ọtụtụ mmadụ na-abanye igwe kwụ otu ebe ka ịnya ebe a n'ọnwa Eprel na Ọgọst.
Uwe okirikiri obodo
Bikezọ ụzọ ụgbọ ịnyịnya ole ka dị n'ọzara Palm?
Chọta ụzọ igwe kwụ otu ebe maka gị site n'ọzara Palm, ebe anyị nwere ụzọ okirikiri 59 iji chọpụta. Ọtụtụ mmadụ na-abanye igwe kwụ otu ebe ịnyịnya ebe a n'ọnwa Ọktọba.
Ugboro ole ka Club Bicycle Club na-agba ịnyịnya?
Route TBD WEEKDAY RIDES - Oge ịgba ịnyịnya dịgasị site na ebe mbido ma nwee ike ịgbanwe n'ihi ụtụtụ oge.